Console Application ရေးသားခြင်း (virtual C + +) [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > ကွန်ပျူတာ ဆိုင်ရာ( Engineering အပါအ၀င်) > Programming > C/C++ > Console Application ရေးသားခြင်း (virtual C + +)
View Full Version : Console Application ရေးသားခြင်း (virtual C + +)
CREDIT @ KO ORGE
ကျွန်တော်ကတော့ ဒီအကြောင်တွေကို ကျွမ်းကျင်နေတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးဗျာ လေ့လာနေတဲ့သူပါ တကယ်ရေးထားတာပါ MCO က ကို Orge (Admin in MCO) ပါ သူရေးထားတဲ့မူရင်းကိုပဲပြန်လည်တင်ပြပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ တကယ်လို.တင်ထားတာတွေထဲမှာ အမှားပါခဲ့ရင်လဲ ကျွန်တော်ပြန်တင်တဲ့အမှားသာဖြစ်ပါကြောင်း........
Microsoft Visual Studio 2005 နဲ့ပဲ ( C++ ကို အဓိကထားပြီး ) ရှင်းပြပေးလိုက်ပါ့မယ် .... .. ( ကျောင်းက ကွန်ပျူတာတွေမှာ 2005 ပဲ install လုပ်ထားတဲ့အတွက် ကျွန်တော့် ကွန်ပျူတာမှာလည်း 2005 ပဲ install လုပ်ထားလို့ပါ Cheesy )
Software ကို install လုပ်ပြီးသွားရင် Microsoft Visual Studio 2005 ဆိုတာကို ဖွင့်လိုက်ပါ .. ( Microsoft Visual C++ 2005 (or) 2008 ကို install လုပ်ထားရင် Microsoft Visual Studio 2005 ဆိုတဲ့နေရာမှာ Microsoft Visual C++ 2005 (or) 2008 ဆိုတာဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် .. ကျွန်တော်လည်း Visual C++ သီးသန့်ကို install မလုပ်ဖူးတော့ အတိအကျမပြောတတ်ဘူး )
Microsoft Visual Studio ဆိုတဲ့ Start Page ပေါ်လာရင် Page ပေါ်မှာ Create: အနောက်က Project ... ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ ..
( ဒါမှမဟုတ် File --&gt; New --&gt; Project ... ( Ctrl+Shift+N ) ကနေတဆင့် ဖွင့်လို့လည်းရပါတယ် ... )
အပေါ်ကအတိုင်းဖွင့်ပြီးလို့ New Project ဆိုတဲ့ Box လေးပေါ်လာရင် Visual C++ --&gt; Win32 Console Application ကို Select ပေးလိုက်ပါ ..
A project for creatingaWin32 console application ဆိုတဲ့အောက်က Name နေရာမှာ နှစ်သက်ရာ အမည်တစ်ခုခုပေးလိုက်ပါ .. ပြီးရင် Ok ပေးလိုက်ပါ ..
အောက်မှာ အနီရောင်လေးတွေနဲ့ ဝိုင်းပြထားပေးပါတယ်ဗျာ
( ကျွန်တော့် Microsoft Visual Studio 2005 က C++ အတွက်သီးသန့်မဟုတ်တော့ Microsoft Visual C++ Software နဲ့ အနည်းငယ် ကွာခြားချင်ကွာခြားနေပါလိမ့်မယ် .. )
Ok ပေးလိုက်တာနဲ့ Win32 Application Wizard .... ... ဆိုတဲ့ Box လေးထပ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ..
Application Settings ဆိုတာကို Select ပေးပြီး Additional options: အောက်က Empty project ကို အမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ ..
ပြီးရင် Finish ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ... ( အောက်မှာ အနီရောင်လေးတွေနဲ့ ပြထားပေးပါတယ် .. )
Finish ပေးလိုက်လို့ ပေါ်တဲ့ Page မှာ Solution Explorer ဆိုတာရှိမရှိအရင်ကြည့်ပေးပါ ။
( Solution Explorer ရဲ့အောက်မှာ Solution &#039;Your Project Name&#039; (1 project) ... ... စတာတွေရှိပါတယ် ။ &#039;Your Project Name&#039; ဆိုတာကတော့ မိမိပေးထားတဲ့ project name ပါ )
Solution Explorer ဆိုတာ ဘယ်လိုဟာလေးလဲဆိုတာ အောက်မှာ အနီရောင်ဝိုင်းပြီး ပြထားပေးပါတယ် ..
တကယ်လို့ Solution Explorer ဆိုတာမရှိခဲ့ရင် View --&gt; Solution Explorer ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ .. Solution Explorer ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ..
( Solution Explorer ရှိနေပြီးသားဆိုရင်တော့ ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါဘူး )
Solution Explorer ပေါ်လာပြီဆိုရင် အဲ့ဒီ Solution Explorer အောက်က Source Files ကို Right Click ပြီး Add --&gt; New Item... ကိုဖွင့်လိုက်ပါ
Add New Item .. ဆိုတဲ့ box ပေါ်လာရင် Categories: အောက်က Code ကို select ပေးလိုက်ပါ ..
ညာဘက်က Templates: ဆိုတဲ့အောက်က C++File(.cpp) ဆိုတာကို ထပ်ပြီး select ပေးပါ ..
ပြီးရင် Createsafile containing C++ source code အောက်က Name မှာ နှစ်သက်ရာ အမည်တစ်ခုခုပေးပြီး Add ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ...
( အောက်ကပုံမှာ အနီရောင်လေးတွေ ဝိုင်းပြထားပေးပါတယ် )
Add ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ မိမိပေးထားတဲ့ နာမည်နဲ့ cpp ဖိုင်တစ်ခု ထပ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်
အဲ့ဒီ cpp ဖိုင်ကို double click လိုက်တာနဲ့ အလယ်မှာ စာရေးလို့ရတဲ့ အဲ့ဒီ cpp ဖိုင်ရဲ့ page လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ...
အဲ့ဒီနေ့ရာမှာ cursor ချပြီး program စရေးလို့ရပါပြီဗျာ ...
program မရေးခင် အရေးကြီးတဲ့ Error List Box လေးကို အရင်ပေါ်အောင်လုပ်ထားပါအုံး .. ( မိမိရေးနေတဲ့ program ဟာ ဘယ်နေရာမှာ ဘာလို့မှားနေတယ်ဆိုတာကို အဲ့ဒီ Error List Box မှာပဲ ပြပေးမှာကြောင့်ပါ )
တကယ်လို့ Error List Box လေးရှိပြီးသားဆိုရင်တော့ ဘာမှ လုပ်စရာမလိုပါဘူး .. မရှိသေးဘူးဆိုရင် View --&gt; Error List ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ..
Error List Box လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ... ( တော်တော်များများ Box တွေကို View Tab ထဲကနေပဲ ပေါ်အောင်လုပ်ပေးရပါတယ် )
Error List Box ရဲ့ ပုံစံကတော့ အောက်ပါပုံအတိုင်းပါပဲ
ဒီလောက်အထိ ပြင်ဆင်ပြီးသွားရင် program စရေးလို့ရပါပြီ ..
ကိုယ်ရေးထားတဲ့ program ကို ဘယ်လို run မလဲဆိုတာကို ဆက်ပြီးပြောပြပေးပါ့မယ် ...
run တဲ့ပုံစံကိုပြောဖို့အတွက် ရေးထားတဲ့ program တစ်ပုဒ်တော့လိုအပ်တဲ့အတွက် အောက်ပါအတိုင်း program အလွယ်တစ်ပုဒ်ကို ရေးလိုက်ပါ့မယ် ..
အဲ့ဒီ Program ကို run ကြည့်ဖို့ဆိုရင် Debug --&gt; Start Without Debugging ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ .. ( Shortcut Key အနေနဲ့ Ctrl+F5 ကို နှိပ်လည်းရပါတယ် )
Debug --&gt; Start Without Debugging ဆိုတာကို နှိပ်ပြီး ခဏအကြာမှာ မိမိရေးထားတဲ့ Program မှန်ရင် အမည်းရောင် Screen နဲ့အတူ မိမိရေးထားတဲ့ program ရဲ့ result ကိုထုတ်ပြပါတယ် .. ...
တကယ်လို့ မိမိရေးထားတဲ့ program ဟာ မှားနေရင် Debug --&gt; Start Without Debugging လုပ်လိုက်တာနဲ့ Error List Box မှာ မှားနေတဲ့ Error ကိုပြပေးပါတယ် ...
Error List Box ထဲမှာ ဘာကြောင့်မှားနေတယ်ဆိုတာကို ရေးထားပေးပါတယ် ..
ဘယ်စာကြောင်းက မှားနေသလဲဆိုတာကို အလွယ်တကူရှာချင်ရင်တော့ Error List Box ထဲမှာ ပြထားတဲ့ error စာကြောင်းကို double click လိုက်ပါ .. မှားနေတဲ့ စာကြောင်းကို cursor ကရောက်သွားပါလိမ့်မယ် ..
ဒီလောက်ဆိုရင် Console Application လေးတွေ ဆက်ရေး ၊ ဆက်လေ့လာလို့ရလောက်ပါပြီ ..
အားတဲ့ တချိန်ချိန်မှာ Window Application ရေးသားပုံ အကြမ်းဖျင်းလေး သိသလောက် ရေးပေးပါ့မယ် ..
အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ ... ( Microsoft Visual C++ Software ကို upload တင်ပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားပေးပါ့မယ် )
Save တာကတော့ မိမိရေးထားတဲ့ Program ကို Debug --&gt; Start Without Debugging ဆိုပြီး run လိုက်တာနဲ့ လက်ရှိရေးထားတဲ့ Program ကို save ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ် ...
Save သွားတဲ့နေရာကတော့ .....
Program ကို စရေးဖို့ Project ကို စပြီး Create ( File --&gt; New --&gt; Project ... ) လုပ်ကတည်းက Location ဆိုတဲ့နေရာမှာ Browse မှတဆင့် မိမိ Save ချင်တဲ့နေရာကို Target ပေးမထားရင်တော့ C:\_Documents and Settings\_Your Computer Name\_My Documents\_Visual Studio 2005\_Projects ထဲမှာ save သွားပါလိမ့်မယ် .. ( Visual Studio 2005 ဆိုတဲ့နေရာမှာ Visual C++ 2005 or 2008 .... စသဖြင့် မိမိ install လုပ်ထားတဲ့ Software Name အပေါ်မူတည်ပြီး Folder Name တူချင်မှတူပါလိမ့်မယ် ၊ C:\_ ဆိုတာကလည်း Window install လုပ်ထားတဲ့ Drive အပေါ်မူတည်ပြီးကွဲသွားပါလိမ့်မယ် :-) )
Window ရှိတဲ့ Drive ထဲမှာ Save ထားတာတော့ သိပ်မကောင်းဘူးထင်တယ် ... .. ( ကျွန်တော်ဆို Window လစ်တိုင်း ရေးထားသမျှ လစ်လစ်ကုန်တာ Cheesy)
တကယ်လို့ မိမိရေးထားတဲ့ program တွေကို C:\_Documents and Settings\_Your Computer Name\_My Documents\_Visual Studio 2005\_Projects ထဲမှာမဟုတ်ပဲ အခြားနေရာမှာ save ချင်တယ်ဆိုရင် Program ကို စရေးဖို့ Project ကို စပြီး Create ( File --&gt; New --&gt; Project ... ) လုပ်ကတည်းက Location ဆိုတဲ့နေရာမှာ Browse မှတဆင့် မိမိ Save ချင်တဲ့နေရာကို ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါ ..
အောက်က ပုံအတိုင်းပေါ့ .. :-)
ဒါဆိုရင် မိမိရွေးထားတဲ့နေရာကိုပဲ auto save ပေးနေပါလိမ့်မယ် ..
အကယ်၍ နောက်တစ်ခါ project အသစ်ကို create ပြန်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း လက်ရှိရွေးထားပေးတဲ့ နေရာမှာပဲ save ပေးပါလိမ့်မယ် ..
Program နောက်အသစ်တစ်ပုဒ် ကိုရေးမယ်ဆိုရင် File --&gt; New --&gt; Project ... ကနေပြန်စရင်ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ် ..
ဒါမှ မိမိ လေ့လာထားတဲ့ program တွေကို မိမိသတ်မှတ်ထားတဲ့ Program Folder Name တွေအလိုက် ပြန်ရှာဖွင့်ပြီး ပြန်ကြည့်လို့အဆင်ပြေမှာပါ ..
အဲ့ဒီလို File --&gt; New --&gt; Project ... ကနေမစတော့ပဲ လက်ရှိရေးနေတဲ့ နေရာမှာတင် နောက်ထပ် program အသစ်တစ်ပုဒ်ရေးချင်တယ် ၊ လက်ရှိ ရေးထားတဲ့ Program ကိုလည်း ပျက်မသွားစေချင်ဘူး .... ဆိုရင်လည်းရပါတယ် ။
လက်ရှိရေးနေတဲ့နေရာမှာ အသစ်မရေးခင် ပထမဆုံး လက်ရှိရေးနေတဲ့ Program ရဲ့ cpp ဖိုင်ကို တစ်နေရာရာမှာ သွားသိမ်းထားလိုက်ပါ ...
လက်ရှိရေးနေတဲ့ program ဟာ E:\_ Drive ထဲမှာရှိတဲ့ C++ ဆိုတဲ့ Folder ထဲမှာ save ထားတယ်ဆိုကြပါစို့ ..
ဒါဆိုရင် အဲ့ဒီ လက်ရှိရေးနေတဲ့ Program ရဲ့ cpp ဖိုင်ဟာ E:\_C++\_Your Program Folder\_Your Program Folder ထဲမှာပဲ .cpp ဆိုပြီး ဖိုင်တစ်ဖိုင်ရှိပါတယ် ..
အဲ့ဒီ cpp ဖိုင်ထဲမှာ မိမိရေးထားတဲ့ program အစအဆုံးရှိပါတယ် .. ( Open With --&gt; Notepad နဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ )
အဲ့ဒီ .cpp ဖိုင်ကိုပဲ မိမိရေးထားတဲ့ အကြောင်းအရာ အမည်လေးတပ်ပြီး တစ်နေရာရာမှာသပ်သပ်သိမ်းထားလိုက်ပါ ..
ပြီးမှ လက်ရှိရေးနေတဲ့နေရာမှာ နောက်ထပ် program အသစ်ထပ်ရေးပါ ။
ဒါဆိုရင် လက်ရှိရေးပြီးသား program ရဲ့ cpp ဖိုင်ကိုလည်း သိမ်းပြီးသားဖြစ်မယ် ၊ File --&gt; New --&gt; Project ... ဆိုပြီး အစကနေပြန်စ စရာလည်းမလိုတော့ဘူး ။ ( လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ သိမ့်းထားတဲ့ cpp ဖိုင်ကို Notepad နဲ့ အချိန်တိုအတွင်း ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရုံပါပဲ )
ဒါပေမယ့် cpp ဖိုင်ပဲသိမ်းထားမယ်ဆိုရင် ရေးထားတဲ့ Code တွေကိုပဲ ကြည့်လို့ရပါမယ် .. အဲ့ဒီ .cpp ဆိုတဲ့ file ကို Microsoft Visual C++ .. နဲ့ဖွင့်ပြီး run ကြည့်လို့တော့မရပါဘူး ..
တကယ်လို့ သိမ်းထားတဲ့ cpp ဖိုင်ကို run ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ File --&gt; New --&gt; Project ... ကနေ project တစ်ခု အသစ်ပြန်လုပ်လိုက်ပါ ..
နောက်ဆုံး Project ကို Create လုပ်ပြီးသွားလို့ Source Files မှာ Item အသစ် ထပ် Add တဲ့အခါမှာ Add --&gt; New Item... ဆိုပြီး ထပ်မလုပ်တော့ပဲ Add --&gt; Existing Item ... ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီး မိမိ run ချင်တဲ့ cpp ဖိုင်ကို Add လိုက်ပါ ..
ပြီးရင် အဲ့ဒီ cpp ဖိုင်ကို run ကြည့်လို့ရပါပြီ ...
မိမိရေးထားတဲ့ program တွေကိုဘယ်လိုပြန်ပြင်ရမလဲဆိုတော့ ....
Program ကို စရေးဖို့ Project ကို စပြီး Create ( File --&gt; New --&gt; Project ... ) လုပ်ကတည်းက Location ဆိုတဲ့နေရာမှာ Browse မှတဆင့် မိမိ Save ချင်တဲ့နေရာကို Target ပေးမထားရင်တော့ C:\_Documents and Settings\_Your Computer Name\_My Documents\_Visual Studio 2005\_Projects ထဲမှာ မိမိရေးလိုက်တဲ့ Program က auto save ပြီးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် .. နောက်တစ်ကြိမ် အဲ့ဒီ Program ကို ပြန်ဖွင့်ကြည့်ချင် (or) ပြန်ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင် C:\_Documents and Settings\_Your Computer Name\_My Documents\_Visual Studio 2005\_Projectsထဲမှာရှိတဲ့ မိမိ ပြန်ဖွင့်ကြည့်ချင် (or) ပြန်ပြင်ချင်တဲ့ Program Folder Name ကိုဖွင့်လိုက်ပါ ..
အဲ့ဒီ Program Name Folder ထဲမှာ မိမိသတ်မှတ်ထားတဲ့ Program Name.sln ဆိုတဲ့ ဖိုင်လေးရှိပါတယ် .. ( Program Name ဆိုတာက မိမိသတ်မှတ်ထားတဲ့ program အမည်ပါ ) ။ အဲ့ဒါကို ဖွင့်ပြီး ပြန်ပြင်လို့ရပါတယ် ။
အောက်က ပုံမှာ အနီရောင်လေးနဲ့ ဝိုင်းပြထားပါတယ် ( ပိုရှင်းသွားအောင်လို့ Cheesy )
ပြန်မပြင်ဘူး ဖွင့်ကြည့်ရုံသက်သက်ပဲဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီ Program Name Folder ထဲမှာရှိတဲ့ .cpp ဖိုင်ကို Right Click --&gt; Open With --&gt; Notepad နဲ့ အလျင်အမြန်ကြည့်နိုင်ပါတယ် ..